चीनबाट थप ३२ लाख भेरोसेल खोप आउँदै, को पर्लान प्राथमिकतामा? – Health Post Nepal
चीनबाट थप ३२ लाख भेरोसेल खोप आउँदै, को पर्लान प्राथमिकतामा?
२०७८ साउन २६ गते १७:१७
सरकारले थप चीनबाट ३२ लाख डाेज भेराेसेल खोप ल्याउने भएकाे छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोसन पोखरेलका अनुसार ७ दिनभित्र १६ लाख डोज र त्यसको केहीदिनपश्चात नै थप १६ लाख डोज आउने पक्का भएको छ।
१६ लाख खरिद तथा १६ लाख डोज अनुदान मार्फत १५ दिनभित्र खोप आउने सम्झौता भएको डा. पोखरेलले जानकारी दिए। १६ लाख खोप अगष्टको १७ तारिखमा नेपालमा आइपुग्ने गरी सम्झौता भएको छ।
‘अबको १५ दिनमा थप ३२ लाख डोज भेरोसेल प्राप्त हुन्छ,’ डा. पोखरेलले भने, ‘ खोप कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुन्छ।’ डा. पोखरेलका अनुसार अन्य देशबाट नै खोप खरिदको प्रक्रिया तिब्र रूपमा चलिरहेको छ।
अहिलेसम्म एक करोड मात्रा खोप नेपाल आइपुगेको छ। यसमध्ये ६० लाख मात्रा खोप खरिद गरिएको छ। चीनबाट ४० लाख भेरोसेल र भारतबाट २० लाख कोभिसिल्ड खोप खरिद गरिएको हो। भारतबाट खरिद गरिएकोमध्ये १० लाख मात्रा खोप अझैसम्म आपूर्ति भएको छैन।
यसैगरी भारतबाट अनुदानमा ११ लाख कोभिसिल्ड र चीनबाट १८ लाख मात्रा भेरोसेल खोप अनुदानमा प्राप्त भएको छ। यस्तै कोभ्याक्स अन्तर्गत ३ लाख ४८ हजार कोभिसिल्ड र अमेरिकाबाट १५ लाख ३४ हजार जोनसन एण्ड जोनसन खोप अनुदानमा प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार अब आउने खोप जोखिम वर्ग हेरी दिने तयारी भएको छ। परीक्षामा दिने विद्यार्थीलाई अब आउने खोप दिने तयारी थालिएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीलाईले जानकारी दिए।
‘पहिला निर्धारण गरेअनुसार हामी उमेर समूहलाई लक्षित गरेर जानुपर्ने हो। तर, पछिल्लो समय परीक्षा दिने विद्यार्थी जोखिममा परेका छन्। विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखी खोप दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ,’ ती कर्मचारीले भने।